Mpịachi Machine Manufacturers & Suppliers | China ịkpakọba Machine Factory
Mpịachi Machine TSB 2060/2
Ntuziaka STEET metal Bender SITE HOTON igwe atụmatụ: 1. Anyị nkenke ịkpakọba igwe FSMS2020 / 2 bụ nke a arọ ụdị. 2. Ya elu agụba nwere ike kpamkpam apịaji. 3. Nke a na ngwá ọrụ Ọdịdị adabara maka nhazi igbe ekara ọrụ iberibe. 4. anyị nkenke ịkpakọba akụrụngwa ozu atụmatụ a ígwè efere ịgbado ọkụ Ọdịdị. 5. menjuobi maka swivel ije nke ekwe doo 6. isi oru pa ...
Mpịachi Machine TSB 2020/2
Mpịachi Machine TSBS 2020/2
Mpịachi Machine PBB2500 / 1.0
Metal ekwe igwe atụmatụ: 1. Ha nwere ọrụ nke ikuku na mmiri nke a pụrụ arụnyere n'ime ogwe aka (nhọrọ) 2. ụkwụ akara, Ọ dị mfe maka ime ihe na-ezuru ike aka. 3. Anyị nkenke ịkpakọba igwe PBB serials atụmatụ a pedal Ọdịdị. Anyị na-etinyere maka patent nchedo n'ụlọ. 4. anyị nkenke ịkpakọba igwe na-eji maka na ekwe mpempe akwụkwọ metal akụkụ. The elu agụba ...
Mpịachi Machine W1.2X1500
Mpịachi Machine W1.0X2000
Mpịachi Machine W1.5X1500
Mpịachi Machine W1.2X2000
Mpịachi Machine PBB2020 / 1.2
Nsoro na Igbe ịkpakọba Machines Atụmatụ: 1.For kpụrụ akụrụngwa ekwe. 2.A n'ụzọ zuru ezu welded Ọdịdị, na kọmpat elu àgwà engineering, hụ kacha nta mmezi, ọnụ na dị mfe ma dị mma na ime ihe. 3.Have ọrụ nke ikuku na mmiri nke a pụrụ arụnyere n'ime ogwe aka (Nhọrọ). 4.Adjustable ekwe n'akuku kwụsị na ọnụ ọgụgụ ruo 135 Celsius 5.With ụkwụ akara. Ọ dị mfe maka ime ihe na Asarel ...
Mpịachi Machine PBB1020 / 1a
Mpịachi Machine PBB1250 / 1a
Mpịachi Machine MFS2020
Mpịachi Machine MFS3020
ekwe Machine , lathe , Mpempe akwụkwọ Metal Machines, Universal lathe Machine , Metal lathe , lathe Machine ,